जव अंकिताले सुशान्तको दु:खद खबर थाहा पाइन् ! – Jagaran Nepal
जव अंकिताले सुशान्तको दु:खद खबर थाहा पाइन् !
बलिउड अभिनेता सुशान्तसिंह राजपुतले देहत्याग गरेका छन्। मुम्बईको बान्द्रास्थित आफ्नै घरमा उनले आइतबार पा सो लगाएर देहत्याग गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। अभिनेता लकडाउनको बेला एक्लै बस्दै थिए । प्रहरी उनको अपार्टमेन्ट पुगेको छ तर देहत्याग कारण भने खुलेको छैन। भारतयी सञ्चार माध्यमले जनाएअनुसार उनी केहि दिन देखि अस्वस्थ महसुस गरिरहेका थिए । भारतीय समाचार माध्यामले जनाए अनुसार सुशान्त र उनका केहि साथीहरु घरमा संगै थिए उनि साथीहरुसंग बिदा भएर आफ्नो कोठामा चुक्कल लागेर सुतेको खुलेको छ । पछि साथीहरुले बोलाउंदा ढोका नखुलेपछि उनीहरुले झ्यालबाट हेर्दा झु ण्डीएको अवस्थामा देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।
उनको यो खबरसंगै अहिले बलिउडमा एउटा छुट्टै सन्नाटा छाएको छ । यसै क्रममा पूर्वप्रेमिका अंकिता लोखण्डे उनको दु:खद खबर सुनेपछि निशब्द बनेकी छिन् । भातरीय मिडियाले अंकितालाई सुशान्तले देहत्याग गरेको विषयमा प्रश्न गरेपछि उनले ‘के ????….’ भनेर फोन का’टिदिएकी छिन् ।उनीहरु दुवै टेलिभिजन सिरियल ‘पवित्र रिश्ता’मा लामो समय काम गरेर चर्चित भएका थिए । यसै सिलसिलामा उनीहरु सम्बन्धमा समेत रहेका थिए । पछि सुशान्त बलिउड गएपछि उनीहरुहरु सम्बन्धमा ब्रेकअप भएको थियो ।
कुनै समयमा एक अर्काको गहिरो प्रेममा रहेका अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुत र अंकिता लोखण्डे ४ बर्ष अघि नै अलग भइसकेका छन् । अंकिता र सुशान्त ‘पवित्र रिश्ता’ नामक टेलिसिरियलमा पति–पत्नीको भूमिका निर्वाह गर्नेताका दुवै एक अर्काको प्रेममा थिए ।तर यी दुवैको लामो पे्रम सम्बन्ध सुशान्त बलिउडको ठूलो पर्दामा स्थापित भएसँगै समाप्त हुन पुग्यो । यसरी सम्बन्ध तोड्दा अनेकौं खबरहरु आएपनि दुवैले यसबारे कुनैपनि प्रतिक्रिया जनाएका थिएनन्। तर सम्बन्ध टु’टेपछि अंकितालाई भने ठूलो झड्का लागेको कुरा कसैबाट लुकेको थिएन ।